Madaxweyne Xasan: Mooshinadu wey na cabsigeliyeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan: Mooshinadu wey na cabsigeliyeen
16th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa manta tegay baarlamaanka, wuxuuna khudbad u jeediyey xildhibaanada.
Madaxweynaha waxaa wehliyey raysulwasaare C/weli Sheekh iyo guddoomiyaha maxkamadda sare Abuukaate Ceydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf.
Shirka baarlamaanka oo uu shir gudoominayey gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxaa soo xaadiray 161 xildhibaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xildhibaanada baarlamaanka ka hor jeediyay khubad uu kaga hadlayay xaaladda uu dalku marayo ayaa ugu horeyn tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay in baarlamaanka uu horyimaado, xili ay soo dhawyihiin maalmaha xoriyadda dalka iyo laba sano guuradii ka soo wareegtay markii dowladda hadda jirta ay xilka qabatay.
Madaxweynaha ayaa xaaladda dalka uu marayo ku soo koobay labo muuqaal oo uu midda koowaad ku sheegay inay soo koobmeyso khilaafaadka madaxda dowladda dhexdooda, islamarkaana ay soo xoogeysanayso midnimada Ummadda Soomaaliyeed iyo in dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay hal aragti iyo mowqif kawada qaateen nabad diidka, sida uu yiri.
Madaxweynaha dalka oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay isbadalka dib u dhiska dalka hadda ka jira oo uu ku tilmaamay in badankood ay Soomaalida leeyihiin, dhanka caalamkuna uu kaalin yar ku leeyahay.
Muuqaalka labaad ayuu madaxweyne Xasan Sheekh ku sheegay in uu yahay in dalka uu ku jiro dalalka ugu hooseeyo ammaanka dalalka caalamka, taasina ay tahay in la iloobo xumaantii la soo maray, si loo gaaro horumarka hadda la hiigsanayo, waxaana uu madaxweynuhu caddeeyay in dowladda ay ka go’antahay in dalka la gaarsiiyo sanadka 2016-ka marxalad la isku dooran karo.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay eedeyn iyo soo jeedin dhawaan uga timid xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka, waxaana uu xusay in soo jeedintaasi uu u arkayo cabsi ay ka qabaan xildhibaannadu in la gaari waayo sanadka 2016-ka himilada la hiigsanayo, isagoo mas’uuliyadda eedeynta ay xildhibaannadu u soo jeediyeen ku yiri “Waa aan qaatay”.
Xildhibaanii mooshinka ka keenay ayuu ugu baaqay iney candhuuftooda dib u liqaan, isagoo xusay in waqti u haray dowladda uusan u qeybsamin waqti howl la qabto iyo waqti la murmo.
Madaxweynaha ayaa xusay in si buuxdo uu ugu kalsoonyahay golaha wasiirada ee hadda shaqeeya, ee uu hogaamiyo Ra’iisul wasaare Cabdiweli, waxaana mar uu ka hadlayay howlaha baarlamaanka uu tilmaamay in wal walka shacabka ay xilliyada qaar ay ka qabaan shaqooyinka baarlamaanka iyo qaabka ay u socdaan, isagoo tilmaamay in loo baahanyahay in wax laga badalo, gaar ahaan xilliyada ay jiraan doodaha mooshinada in kalfadhiyada baarlamaanku uu soo buuxsamo, halka marka ay shirarka caadiga ah galayaana aanu kooramka buuxsamin, taasi oo uu ku sheegay in tahay dhaliil jirto.
Xildhibaannadu ayuu uga digay madaxweynuhu dhaliilaha dhanka warbaahinta la isu mariyo in qaarkood aysan ahayn kuwa wanaagsan.
Madaxweynaha ayaa mudanayaasha ku booriyay inay mudnaanta siiyaan xildhibaannadu howlaha baarlamaanka horyaalla, gaar ahaan kuwa saameynta ku leh in la gaaro sanadka 2016-ka yoolka la hiigsanayo.
Madaxweyne Xasan ayaa xusay in loo baahan yahay in Soomaaliya laga helo deganaasho siyaasadeed si loo gaaro wax dowladdu higsaneyso.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday inuu la kulmayo cabsigelin uga imaaneysa Alshabaab, maxkamadaha iyo mooshinnada xildhibaanadu keenayaan baarlamaanka.
Horay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ugu soo jeediyeen madaxweyne Xasan inuu is casilo, iyagoo sheegay in dowladdu fashilantay, isaguna sabab u yahay fashilka.
ISIS oo magaalo kale ka qabsatay ciidanka dowladda Ciraaq
Alshabaab oo sheegtay weerarkii lagu laayey dad ku noolaa gobolka Xeebta Kenya